Read more about မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ
Policy, Objectives and Functions
The Auditor General of the Union has to audit the accounts of receipt and payment of the Union and submit the audit report to the President of the Union and the Pyidaungsu Hluttaw simultaneously.
The office of the Auditor General of the Union has to audit whether or not Union Level Organizations, Union Ministries, Government Departments, Government Organizations and Nay Pyi Taw Council manage their money, prepare and keep the accounts properly; it has to prescribe the accounting system for them and inspect whether or not it is applied as prescribed, inspect the work implementation of them and submit the report transparently.
၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ ငွေသားအခြေခံအပိုင်း (၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၂/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း
၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်စာရင်းစစ်မှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၂/၂၀၂၂ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း